အကောင်းဆုံးသဘာဝထုတ်လုပ်မှု Seabuckthorn အမျိုးအနွယ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအမြောက်အများထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ဟိုင်ရီ
သဘာဝထုတ်ယူ Seabuckthorn မျိုးစေ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအမြောက်အများစျေးနှုန်း
10ml / 30ml / 50ml / bulk
seabuckthorn, seabuckthorn အမျိုးအနွယ်ကို
10ml, 20ml, 100ml သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်
ရေမွှေး, လန်းဆန်း, ကုသမှု
ပုလင်း၊ စည်၊ ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာ
တစ်ပတ်လျှင် 5000 ကီလိုဂရမ် / ကီလိုဂရမ်လျှင်မြန်သောရေနံ
ပုလင်း, စည်, etc
အရေအတွက် (ကီလိုဂရမ်) ၁ - ၁၀၀ 101 - 300 > 300
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 8 10 ညှိနှိုင်းခံရဖို့
ပစ္စည်းအမည်: ရောင်းအားကောင်းသောပင်လယ်ကြမ်းတမ်းသောအသီးများကိုစင်ကြယ်သော seabuckthorn မျိုးစေ့ဆီ
Seabuckthorn မျိုးစေ့ဆီသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ သိသာထင်ရှားသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ၊ ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ရေခဲခြင်း၊ နှင်းခဲခြင်း၊ အနာစသည်တို့ကိုကုသရာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ Seabuckthorn မျိုးစေ့ဆီသည်ဂလင်းများ၊ အသည်းရောင်နာ၊
Seabuckthorn အမျိုးအနွယ်ဆီသည်ဗီတာမင်များနှင့်ဇီ ၀ သက်ရှိများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အသားအရေကိုအာဟာရဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဓာတ်မတည့်မှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးကိုတိုက်ဖျက်ရန်၊ epithelial cell regeneration ကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ အရေပြားကိုပြုပြင်ခြင်း၊ အရေပြားသည်အက်ဆစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း၊
ရောင်ရမ်းခြင်း၊ myogenic နှင့်တစ်သျှူးသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးခြင်းကိုမြှင့်တင်သည်
Antitumor နှင့် anticancer
seabuckthorn flavonoids ၏ထိရောက်သောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ မြင့်မားသောသွေး lipids များကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ သွေးတွင်း viscosity များကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ platelet စုဆောင်းခြင်းကိုတားဆီးသည်၊ အလွန်အကျွံပျော့ပျောင်းသောသွေးကြောများ၊ သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်၊ စနစ်။
1. 1-200ml / ပုလင်း
2. 1-50kg / ပလပ်စတစ်စည်သို့မဟုတ် / လူမီနီယံပုလင်း
3. 180 သို့မဟုတ် 200kg / စည်
၅။ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ် - ငွေပေးချေပြီး ၅ ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်းတင်ပို့သည်
စင်ကြယ်သောပင်လယ် buckthorn ရေနံ
ပင်လယ် - buckthorn ရေနံ
HR ဖရုံသီးအမျိုးအနွယ်ကိုဆီဖရုံသီးအမျိုးအနွယ်ဆီစျေးနှုန်းအအေး ...
နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများအရသာ / အစာနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ရန် ...
ပibိဇီဝဆေးသည် Lemongrass မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနွေးငွေ့ Disti ...